Maxaad ku samaysay dabeecadaada wanaagsan? Calaamadaha ugu xun ee maskaxda - TELES RELAY
ACCUEIL » DARYEELKA CAAFIMAAD Maxaad ku samaysay dabeecadaada wanaagsan? Calaamadaha ugu xun ee maskaxda
Maxaad ku samaysay dabeecadaada wanaagsan? Calaamadaha ugu xun ee maskaxda
Haddii aad rabto in ilmahaagu diyaar u noqdo inuu ku noolaado bulshada, waxaad u baahan tahay inaad wax ka barato da 'aad u yar. Si kastaba ha noqotee, mararka qaarkood, wax kasta oo dadaalka waalidiinta, caruurtu waxay u adeegsadaan raaxo gaar ah. Cilmi-baarayaashu waxay yiraahdaan heerka qarsoodiga qofku kuma tiirsan yahay oo kaliya qoyska iyo macallimiinta, laakiin sidoo kale isaga calaamadda calaamadda. Taasina waa sababta, isla qoyska dhexdiisa, waxaa jiri kara ilmo caado wanaagsan leh iyo mid kale oo aan waxba galabsan!
Calaamadaha ugu xun ee maskaxda
Marka waalidiintu wax baraan aroos yar, xeerarka dhaqanka wanaagsan ee bulshada, ilmuhu wuxuu isku dayaa inuu adkaysto. Ugu dambeyntii, waxay siineysaa qof qaangaar ah oo iska dhaafi kara raaxada dadka kale.
Mashruuc ay wadaagaan Ururka Bulshada Dhibaatada ah (@inconsiderate_conduct) on Nov 9, 2018 at 5: 02am PST
Bullsku waxay ogaanayaan waxa dhabta ah iyo waxa aan sameyneynin. Laakiin haddii ay rabaan inay telefoonka kala hadlaan ama ay baska saaraan, waxay sameyn doonaan iyada oo aan walwal lahayn. Furaha ayaa ah in laga fogaado aqoonta barashada; run ahaantii, waxay isku dayaan inay qariyaan dabeecadooda xun.
Mashruuc ay wadaagaan Ururka Bulshada Dhibaatada ah (@inconsiderate_conduct) on Nov 11, 2018 at 3: 11am PST
Kalluumaysigu mar walba ma garanayo sida dadku u dhaqmaan. Haddii wax ka duwan sida loo isticmaalo, waxay noqon karaan kuwo qallafsan. Way ka fiican tahay in laga fogaado marka ay ku jiraan xaalad xun.
Waxaa qoray Posted by Travel & Leisure Blogger (@joey_dmn) on Mar 26, 2019 at 1: 50pm PDT
Haddii aad adigu isku aragtay liistadaan, ha isku buuqin. Taas macnaheedu waa in aad ka shaqeyneysid niyadaada waxoogaa ka badan kuwa kale!
Mawduucaan maqaalkani waa ujeedo macluumaad oo keliya. Guddiga Xukunka ma xaqiijinayaan wax natiijooyin ah mana kugula talinayaan akhristaha inuu ku tiirsanaado dhammaan macluumaadka kor ku xusan.
Xaalad ba'an: Maxaa ku dhacaya hormoonnada haweenka ee ka weyn sanadaha 40?